Izixhobo ezinokubuyisela kwi-iOS 5.x ngeRedsn0w 0.9.15b1 entsha | IPhone iindaba
UGonzalo R. | | iOS 5, Jailbreak
La Inguqulelo entsha yeRedsn0w kukhutshwa nje liQela leQela kubandakanya iinketho ze Buyisela ku-iOS 5.x izixhobo ezintsha (emva kwe-iPhone 4 ezingenazo izixhobo ezifunyenweyo zehardware), ayinamsebenzi ukuba ukwinguqu ephezulu okanye esezantsi ye-iOS 5 (ayikhe ivele kwi-iOS 6).
Izixhobo "ezindala" (i-iPhone 4 nangaphambili) zinokuthoba umgangatho ngokulandela esi sifundo okanye ukusebenzisa iRedsn0w entsha ngendlela elula. Zonke ezinye izixhobo zinezithintelo ezithile Ukufaka kwakhona i-iOS 5, funda kuyo yonke ingcaciso:
I-Redsn0w ikuvumela ukuba ubuyisele isixhobo se-A5 kwi-iOS 5 kuyo nayiphi na i-iOS 5.x, kodwa kufuneka ube ne-SHSH ye-iOS yangoku yesixhobo sakho kunye ne-iOS ofuna ukuyifaka.
Awunakho ukubuyisela ukusuka kwi-iOS 5.x ukuya kwi-iOS 5.x ukuba i-5.x yakho yangoku ifakwe nge-OTA (kwisixhobo uqobo). Ukuba awazi, iRedsn0w iyayibhaqa, ungakhathazeki.
Kwizixhobo ze-A5 iRedsn0w ayikuvumeli ukuba kugcinwe i-baseband, i-baseband ekhoyo iya kufakwa (enye evela kwi-iOS 6.0 ngexesha lokubhalwa kweposti). Ukuba ufuna isoftware okanye iGevey SIM ukuvula ukuhlala kude noku kubuyiselwa kwakhona. Ukuba i-iPhone yakho ikhona Ikhutshwe yi-IMEI akhongxaki.
Ukufaka i-iOS 5.x kwi-iPad 2 ufuna i-SHSH ye-iOS 5.x ofuna ukuya kuyo kunye ne-SHSH ye-iOS 4.x. Ukuba awunayo i-SHSH kwi-iOS 4.x awukwazi ukufaka i-iOS 5.x.
Unokuzikhuphelela iRedSn0w 0.9.15b1 apha:
Iinkcukacha ezithe xaxe - Vula i-iPhone yakho ngonaphakade: vula nge-IMEI
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 5 » Izixhobo ezinokubuyisela kwi-iOS 5.x ngeRedsn0w 0.9.15b1 entsha
Ke unokuzikhuphelela ii-4s ezine-6.0, ezihlaziyiweyo nge-iTunes, kwaye unayo i-shsh?
Ukusuka kwi-iOS 5 ukuya kwi-iOS 5
Hayi ukusukela nge-iOS 6
Esi sithuba sicebisa ukuba ungathobela indawo ukusuka kwi-ios 6 ukuya kwizixhobo ezine-chipA5 kwaye ayisiyiyo.
Akucaci kum, ndine-4s ene-5.1.1, ndingayibuyisela njani ukuze ndenze ukubuyisela okucocekileyo?
Ungayitsho kanjani le nto: "Ayinamsebenzi nokuba ukwinguqu ephezulu okanye esezantsi ye-iOS.", Oko kuthetha ukuba unakho ukusuka ku-6.
isezantsi okanye ngaphezulu kune-iOS 5 ofuna ukuyifaka
Ngokuchanekileyo, i-6 ingaphezulu kwe-5.1.1.
Singaxoxa ngonaphakade, inguqulelo ye-iOS 5 ephezulu okanye esezantsi kunaleyo uyifakileyo, ungaya kwi-iOS 5.1.1 ukusuka kwi-iOS 5.1 okanye kwi-iOS 5.1 esuka kwi-iOS 5.1.1, ongakwaziyo ukukhuphela kwi-iOS 6 kuba akukho sixhobo sehardware, nokuba ungandibuza kangaphi into efanayo.
Ukuba ndine-iPhone4 enekhadi le-gevey dealextteme (imowudi yenqwelomoya njlnjl) ene-4.2.1 yokuqhekeka ejele ndingaya ku-5.1.1 ngaphandle kokulayisha i-baseband kwaye ke ndikwazi ukuqhubeka nokukhululwa?
Molweni maqabane !! Ndinengxaki encinci, ndathenga ii-4s ezitywiniweyo kwiVodafone kuguqulelo 5.1.1, ndiyaphule ejele, kodwa akukho ndlela ndinokuthi ndigcine ngayo i-shsh yenguqulo endinayo kuba iApple ayisayisayini loo iOS.
Ngaba ndigwetyelwe ukuthandazela ukuba iphone yam ingaxhomeki, kuba ndingabeka kuphela i-iOS esayiniweyo yamva nje?
Ngaba akukho ndlela yakugcina i-shsh kwakhona?
Kulungile. Ngokubhekisele kwigumbi lokuqala le-3gs:
Kukwi-4.2.1 kodwa ngaphandle kwe-sssh kamva.
Ngaba ndinganyuka ndiye kwi-6 ndize ndithothule ngaphandle kokufumana isiginitsha ye-5.0 5.0.1 5.1?
Ndingathanda kakhulu i-gs nge-5.1
Ndingaya ku-6 ngaphambi ko-5.X. I-3GS icotha kakhulu kwi-5.X (okanye ubuncinci ngo-5.0.1, yile nto bendinayo). Ndilifundile inqaku lomfana ofake ios6 kwii-3gs kwaye wenza kakuhle kakhulu… Ungcono kakhulu kune-ios5… Ungasoloko ukongeza ukusebenza kwe-ios6 egutyungelwe kwii-3gs nge-cydia tweaks
Kwi-ipad2 kukho ukudideka. Ufuna kuphela i-SHSH ukusuka kwinguqulo 4.X ukuze wehlise ukusuka kuhlobo lwe-6x ukuya kwi-5.x okanye kwi-4x. Sesona sixhobo se-A5 esivumela ukwehliselwa kwinqanaba kwi-ios6
Ukuba ufuna ukusuka ku-5.x uye kolunye u-5.x awuyidingi i-SHSH ye-4.x, inokusebenza kuphela ne-SHSH yeenguqulelo ofuna ukusuka kuzo kunye naleyo ufuna ukuya kuyo .
yeniffer saavedra sitsho
Ukuba ndine-3gs ye-iphone kuhlobo 4.1 phantsi kwe-ipad baseband kodwa ayinayo inguqulelo 5.1.1 kwi-sssh ndingafaka u-5.1.1 ngendlela efanayo enkosi
Phendula yeniffer saavedra
Ndinengxaki nee-3gs zam, zafakwa kwi-6.1 kodwa andifumani nkonzo kwaye ayiboni nawuphi na umsebenzisi. khuphela i-ultrasnow 6.1 kodwa ayisebenzi. Ndiyifumana njani kwakhona ios 5.1 endiyinike yona ukuba iyisebenzele. isenokwenzeka okanye ayinakho
Isifundo: uyibuyisela njani kwakhona i-iPhone yakho kwi-iOS 5.x ukuya kwi-iOS 5.x
I-Redsn0w ihlaziywa ngeendlela zokubuyisela kwi-iOS 5.1.1